Panthenol, Polyquaternium, Pvp Polymer, Yekuchengetedza Yega Zvinongedzo - Y&R
Kuchengetedza Kwemunhu Pamwe
Kojic Acid & zvinobva
Poly (Methylvinylether / Maleic Acid) yakavhenganiswa Salts
Poly (MethylvinyletherMaleic Acid) Hafu Esters Copolymer
Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Muchinjikwa
Zvimwe Zvishandiso Zvinoshanda
Mwaya Kuomesa Lactose
Tetra-Tsono Senge Zinc Oxide Whisker
DL -Panthenol Upfu
Y & R, yakanyoreswa muTianjin Mahara Ekutengeserana Nzvimbo (FTZ), kambani yakarongedzwa zvakare kubva kuKingchem International Ltd iyo yakatanga kumisikidzwa mu2012 Tiri kuita mukugadzira nekuparadzira huwandu hwakawanda hwehuwandu hwezvakakosha, zvigadzirwa, zvigadzirwa. , intermediates uye solvents epasirese cosmetic / kuchengetwa kwega, mishonga, chikafu, H & I nemamwe maHi-Tech maindasitiri.
Isu tinogara tichitsvaga 'Mutural Trust & Kugovana, Mutual Kubatana & Bhenefiti', uye isu tiri kuita kuyedza kwedu kuendesa yakasarudzika zvigadzirwa, sevhisi kune vamwe vedu.
Isu takanangana nekugadzira uye kugovera mavitamini, PVP Polymers uye Pyrrolidone based solvents / intermediates, PVM / MA Copolymers, Kojic Acid dipalmite uye nezvimwe.
Y & R (YNR) inogara yakazvipira kuita zano rekusimudzira rinowoneka, rinotarisana nekubatana kwevanhu uye nemasikirwo ekuedza kugadzira nzira yehupfumi iri kusimukira.
Mhinduro uye Sevhisi
Y & R, yakanyoreswa muTianjin Mahara Ekutengesa Nzvimbo ...
Iyo kambani yakarongedzwa zvakare kubva kuKingchem International Ltd iyo yakatanga kumisikidzwa mu2012.
152020 / Gunyana
New Type Polyquaternium-11 Sekuru La ...
Nyowani Type Polyquaternium -11 Yakatangwa Zvakakura Iyo yekutengesa Polyquaternium-11 ine approx. 20% yakasimba zvemukati ine yakakwira mamorekuru uremu. Kusangana nezvinodiwa mumusika, isu tinotaurira Polyquaternium-11 50%. Polyquaternium-11 ndiyo polymeric quaternary ammonium munyu wakaumbwa neyakaitwa diethyl ...
042020 / Gunyana
YAKANYANYA KUNYANYA Kune DL-Panthenol Powder
Tiri kupa mutengo wakasarudzika weDL-Panthenol Powder USP Giredhi panguva yaSept.01,2020 kusvika Sep. 30,2020.Uchawana mhinduro yekukurumidza ine ruzivo kana uchinge watumira chero zvikumbiro kwatiri. DL-Panthenol iguneti huru, ine fomu chena yehupfu, yakanyungudika mumvura, doro, propylene glycol.DL-Panthen ...